Beddelaadaha ugu wanaagsan ee Google ADSENSE [HAGAHA DHAMMAAN]
Inicio/Talo soo jeedin/Beddelka ugu wanaagsan ee Google AdSense (HAGAHA DHAMMAAN)
Beddelka ugu wanaagsan ee Google AdSense (HAGAHA DHAMMAAN)
0 935 22 daqiiqo akhri
Ku soo dhawow Citeia, markan waxaan kuu keenaynaa isku soo uruurinta kuwa ugu fiican beddelka Google AdSense inaad lacag ka sameysato boggaaga.
Hagaag, maadaama aad halkan joogto, waxay u badan tahay inaad xiiseyneyso inaad bilowdo inaad ku muujiso xayeysiinta websaydhkaaga, si aad u abuurto faa'iido oo aad awood ugu yeelatid inay xasilloon tahay dhammaan isticmaaleyaashaada.
Haddii aadan ahayn akhristaha noocyada maqaallada, halkan waxaa ah xiriiriyeyaasha beddelka Google AdSense si loogu muujiyo xayeysiinta khadka tooska ah, si aadan waqti ugu luminin raadinta; LAAKIIN, Waxaan kugula talinayaa inaad akhriso maqaalka oo dhan.
Beddelka Google AdSense ee aan ka hadli doonno:
Xayeysiinta Dheeriga ah ama Isku xirnaanta:
Lacag-sameynta ku habboon Xayeysiiska iyo Isku-xirnaanta:
BUUXI tilmaamaha iibinta walxaha
Hadda, ka hor intaanan bilaabin inaan sharxo waa maxay Google AdSense iyo sidee u shaqaysaa? Iyo mid kasta oo ka mid ah beddelka Google Adsense si ay lacag uga sameyso websaydhkaaga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato ereyada qaarkood, sida: CPC (Qiimaha Guji), CPA (Qiimaha Waxqabadka), CPM (Qiimaha Kunkiiba), CPL (Cost Per Lead), iyo CTR (Boqolleyda qasabadaha); ka sokow ogaanshaha waxa a "Xayeysiiyaha" iyo a "Daabacaha".
Xayeysiiyuhu waa qofka, ama hay'adda ganacsi ee, iyada oo loo marayo warbaahinta badan ee xayeysiinta ah, ay damacsan tahay in ay ku shaaciso badeecadeeda ama adeegyadeeda ganacsi, laga yaabee iyada oo loo marayo Google Adsense ama mid kale oo lagu beddelan karo.
Daabacaha dhinaca kale wuxuu noqdaa milkiilaha goobta lagu doonayo in lagu soo bandhigo xayeysiin. Sidaa darteed, markii aad iska diiwaangeliso inaad tahay madbacad shirkad kasta oo xayeysiis ah, waxaad ku siineysaa boos boggaaga ah si ay ugu soo bandhigto xayeysiis.
CPC - Qiimaha Hal Guji
Habkani wuxuu ka kooban yahay xayeysiistaha oo ku abaalmarinaya daabacaha guji kasta oo ay heshay xayeysiinta lagu soo bandhigay degelkeeda. Mid kasta Xayeysiiya deji qaddar aad ku bixinayso xayeysiis kasta, tusaale ahaan; Haddii olole leh qaddar guji kasta $ 1 uu helo 100 guji maalintii, xaddiga la siinayo kan Daabacaadda waa $ 100.
CPA - Qiimaha Waxqabadka
Dhinaca kale, qaabkan waxaad ku bilaabaysaa inaad dakhli ka soo saarto qofka isticmaala marka lagu daro gujinta xayeysiiska, qaado hal talaabo oo dheeri ah; badiyaa waa wax iibsasho, ama iska diiwaangelinta goobta, iyagoo siinaya xayeysiiyaha ikhtiyaar u leh inay kordhiyaan keydkooda macluumaadka macaamiisha mustaqbalka.
CPM - Qiimaha Kumanaan Kun (Dareeno)
Sida xarfaheeda hore ku muujinayaan, qaabkan xayeysiiyaha bixin halkii kun aragtiTan waxaan uga jeednaa kunkii jeerba in xayeysiinta lagu muujiyo dadka isticmaala internetka. Marka haddii websaydhkaagu leeyahay tiro badan oo taraafiko maalinle ah, xulashada habkani aad ayuu faa'iido u yeelan lahaa.
CPL - Qiimaha Macdanta "Lead"
CPL waxaa loo yaqaanaa kharashkiiba halkii hogaan, ama haddii si kale loo dhigo, waa qiimaha macmiil kasta oo macquul ah (hogaaminta). Waa inta xayeysiistaha uu diyaar u yahay inuu bixiyo si fursad iib ah looga helo madbacadda. Hoggaamintani waa inay buuxisaa foom ay uga tagi doonaan xogtooda shaqsiyeed si loogu diiwaangeliyo keydka macluumaadka oo markaa iyaga loogu deeqo alaabada ama adeegyada.
CTR - Boqolleyda qasabadaha
CTR waa halbeeg kuu sheegaya sida wax ku oolka ah ama xiisaha leh ee ololaha xayeysiinta ee la muujiyay uu yahay. Taas oo macnaheedu yahay in sare u qaadista CTR, ay waxtar badan u leedahay ololaha.
Kahor intaadan sii wadin inaad ku tusto waxa Google Adsense yahay iyo waxyaabaha ugu fiican ee lagu beddeli karo, waxaan jeclaan lahayn inaan ku nuuxnuuxsanno in qaar ka mid ah shabakadaha internetka ee aan hoos ku soo bandhigi doonno ay u baahan yihiin ugu yaraan taraafikada in la aqbalo, sidaas darteed waxaan kugula talin Tilmaamaha QUORA - U adeegso Quora si aad u Dhigto boggaaga.
Waa maxay google AdSense?
Most Google hadda waa aaladda ugu fiican ee lagu kasban karo boggaaga, gaar ahaan marka aad bilaabayso inaad ka shaqeyso. Barnaamijkan ka socda shirkadda weyn ee Google wuxuu noo ogolaanayaa inaan lacag ka sameysano degelladayada hab aad u fudud, ka sokow inaad gebi ahaanba xor tahay.
Inaad bilawdo adeegsiga Most Google Kaliya waa inaad xisaab leedahay, haddii aadan lahayn, waxaad ku abuuri kartaa si dhakhso leh oo fudud. Waxa xiga waa inaad siiso lambarka taleefankaaga xiriirka iyo cinwaankaaga boostada, oo muujinaya faahfaahinta koontadaada bangiga halka lacagaha lagu bixin doono.
Ugu dambeyntiina, markaad gasho koontadaada Most GoogleAdigoo si fudud ugu darista qeyb ka mid ah koodhka, waxaad hore u lahaan kartaa xayeysiisyada boggaaga si aad u bilowdo soo saarista faa'iido iyadoo loo marayo xayeysiinta la bixiyay.
Adsense waxay siisaa kumanaan daabacayaal hab ay si wax ku ool ah ugu abuuri karto dakhli xayeesiinta internetka. Google wuxuu qiimeeyaa xayeysiis kasta oo la bixiyo si ay ugu fiicnaato sida ugu macquulsan uguna wanaagsan natiijooyinka boggaaga, had iyo jeerna muujinaya kuwa ugu habboon, iyada oo ku saleysan macluumaadkaaga shabakadda iyo adeegsadayaasheeda.
Xayeysiisyada ay bixiyaan Most Google Waxaa maamula oo lacag siiya xayeysiiyayaal doonaya inay xayaysiiyaan wax soo saarkooda. Xayeysiiyayaashan oo xiiseynaya inay muujiyaan wax soo saarkooda ayaa noocyo kala duwan oo xayeysiis ah dul dhigaya, tani macnaheedu waa in lacagta aad soosaaraysaa ay aad isu beddelayso
Kala doorashooyinka aad haysato Most GoogleWaxaad fursad u leedahay inaad gacanta ku xusho goobta gaarka ah ee boggaaga halka aad rabto in xayeysiinta la soo bandhigo, oo lagu daray inay si otomaatig ah u hagaajin doonto si aysan u beddelin soo bandhigida websaydhkaaga.
Sidee Google Adsense lacag uga sameeyaa?
Waqtigan xaadirka ah, waxaa muhiim ah in la xoojiyo taas, si loo bilaabo abuurista dakhli marka xayeysiinta la soo bandhigo, dadka isticmaala booqda degelkaaga waa inay gujiyaan xayeysiiska, haddii kale ma heli doontid faa'iidada laga filayo. Lacag bixinta Adsense Google Waxaa la sameeyaa bille, kaliya haddii aad gaarto heerka lacag bixinta ee 70 (Euros).
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, lacag bixinta waxay ku xirnaan doontaa tirada qasabadaha ka dhasha xayeysiiska iyo tayadiisa. Marka waxaan kugula talineynaa in xayeysiinta had iyo jeer la dhigo goobo istiraatiiji ah si waxqabad wanaagsan loo helo; tan iyada oo looga dan leeyahay in sida ugu badan looga faa’iideysto CPC ama Qiimaha Google Hal Guji, oo sheegta inay heystaan ​​heerka ugu sarreeya suuqa.
Waa maxay sababta beddelka Google Adsense loogu baahan yahay?
Qodob muhiim u ah Google Adsense ayaa ah arrinta tayada iyo xaqiiqnimada; Marka kahor intaadan kugu aqbalin barnaamijkooda, waxay qiimeyn ku sameyn doonaan boggaaga internetka si ay u arkaan haddii aad u hoggaansameyso dhammaan xeerarka farsamada iyo waxyaabaha ku jira.
Waa in la ogaadaa in ka mid ah sharciyadeeda, waxyaabaha ku habboon kuwa aan qaan-gaarka ahayn ee faafinaya nacaybka ama rabshadaha, iyo sidoo kale waxyaabaha anshax darrada ah, waa gebi ahaanba mamnuuc. Iibinta maandooriyaha, aalkolada iyo tubaakada sidoo kale waa ka mamnuuc waxyaabaha ku jira. Laakiin sababta ugu weyn ee loo xannibayo oo lagaa saarayo bandhiggooda ayaa bixisa waxyaabo aan asal ahayn iyo xuquuq-xadgudub ku-xadgudub ah, ama isku day ah inaad gujiso khayaanada.
Google Adsense waa shabakadda ugu weyn ee xayeysiinta adduunka, waxay leeyihiin, sida ku xusan bayaanadooda, 80% wadarta isticmaaleyaasha, waana sababta ay u tahay doorashada koowaad ee daabacayaal badan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira suurtagalnimada in, wakhti kasta, lagaa reebi doono barnaamijka, markaa waxaan kugula talineynaa inaad wax yar haysato ku xayeysiinta waxyaabo kale oo aan ahayn Google Adsense gacanta.
Inaad sii wadato oo ku tusto fursadaha kale ee Adsense, waxaan u maleyneynaa inaad rabto inaad gadaal ka ogaato barnaamijyada ugu fiican ee lacag looga helo internetka.
Kuwani waa kuwa ugu fiican Beddelka loo tixgelinayo Google Adsense 2021:
Dhibco: 4 ka mid ah 5tii.
Waa shabakad xayeysiin ah oo maalin kasta qaadata qayb dheeri ah oo ka mid ah qaybtan, oo ku dhex taal meelaha ugu wanaagsan ee adeegga xayeysiinta iyo xulasho xooggan oo ka dhex jirta beddelka Google Adsense; xarunteeda guud waxay ku taal Mareykanka, maalin walbana kumanaan isticmaale ayaa soo diro codsi inay la shaqeeyaan. In ka badan 200 oo dal iyo 70 luqadood ayaa la aqbalay.
MGID waa shirkad raadisa waxa ugu fiican kuwa ugu fiican, sidaa darteed iyagu aad bay u xushaan markay tahay aqbalida xayeysiistaha ama daabacade kasta, mamnuucyada waxaa ku jira:
Goobaha madadaalada dadka waaweyn, spyware sida Keylogger, spam, iyo inbadan.
Tusmada tayada liidata ama waxtar yar u leh akhristaha.
Maqaallo la daabacay ama nuqullo ah.
Waxyaabaha dawada ka kooban ama alaabada.
Xayaysiis noocee ah ayaad bixisaa?
Lacag-sameynta waa xaqiiqo jirta marka loo eego fikradda CPC, guji kasta wuxuu kuu soo saari doonaa faa iidooyin websaydhkaaga, marka lagu daro CPM, xayeysiisyada la bixiyo waxay leeyihiin qorshayaal kala duwan, oo ay ka mid yihiin: Sidebar, boodhadh, saamaynta waxyaabaha ku jira, cinwaanka iyo xitaa mobilka. MGID sidoo kale waxay bixisaa waxyaabo pop-up ah, kan dambe sifiican looma arko midka weyn ee Google.
Xayeysiisyada ay bixiso MGID waa sax oo waa la xaqiijiyay, markaa isticmaaluhu khatar uguma jiri doono khayaano kasta, marka lagu daro inuu leeyahay algorithm awood u leh inuu la jaanqaadi karo una beddelayo baahiyaha iyo dalabaadka isticmaalaha.
Sidee tahay habka lacag bixinta?
Lacagta ugu yar ee laga bixin karo barnaamijkan waa $ 100, iyadoo lagu soo celcelinayo lacag bixinta 30-kii maalmoodba, iyada oo loo marayo PayPal, Payoneer ama kala iibsiga bangiga. Dhibaatooyin marka la joojinayo qaansheegta? Maya, illaa iyo hadda MGID ma aysan soo bandhigin wax dhibaato ah marka la wareejinayo qaddarka ay ururiyeen madbacadaha.
Sidee loola shaqeeyaa MGID?
Nidaamku waa la fudud yahay sida dhufto ee kale, waa inaad isdiiwaangelisaa oo aad buuxisaa foomka. Nidaamkani wuxuu qaadan karaa dhowr maalmood, maadaama ay aad u taxaddaraan markay tahay aqbalida degel kasta. Waa hagaag, maahan oo keliya ku saabsan lahaanshaha degel leh taraafiko badan, laakiin sidoo kale la kulanka heerarka tayada ee ay qeexday MGID.
Barxadani waxay tixgelineysaa waxyaabaha dhowaan soo baxay, daabacaadda joogtada ah, ka mid noqoshada sawirrada, nuxurka wanaagsan iyo la macaamilka isticmaalaha; Kumaa u adeegsan kara MGID beddellada Google Adsense? Dhamaan kuwa sabab uun u ah Adsense maahan dookhooda koowaad, ama sababo laxiriira waxyaabaha aan la aqbalin ama shabakada awgeed.
Faa’iido darrooyinka ka jira barxadda?
Nidaamka aqbalaadda degelku wuxuu badanaa qaataa dhowr maalmood.
Blogs waa inay u hoggaansamaan taraafikada iyo tayada waxyaabaha ku jira isticmaaleyaasha.
Ma aqbalaan shabakadda madadaalada dadka waaweyn, spam, nuqullo nuqul ah, iyo wixii la mid ah.
Waa barxad caalami ah oo loogu talagalay xayeysiinta, taas oo, sida Adsense, ujeedadeedu tahay inay hesho farriimo astaan ​​u ah macaamiisheeda ugu fiican. Infolinks waxay leedahay suuq in ka badan 100.000 oo bog oo ka hawl gala 127 dal. Xayeysiisyadiisa si buuxda ayaa loo habeyn karaa oo leh meel gaar ah oo lagu hagaajinayo tirada qasabadaha, si loo go'aamiyo ku-habboonaanta iyo ujeedka xayeysiinta waxay isticmaashaa algorithm caqli-gal ah, kaas oo u oggolaanaya in lagu bixiyo xayeysiisyo habboon waqtiyada habboon.
Noocee xayeysiis ah ayaad bixisaa?
Shabakadan xayeysiinta waxay ku takhasustay qaabab xayeysiis aan caadi ahayn, iyadoo la tixgelinayo in goobaha xayeysiinta ee caadiga ahi ay yar yihiin oo ay yar yihiin booqashada, taas awgeed, Infolinks waxay samaysay qaabab u gaar ah, kuwaas oo aan ku magacaabi karno: InFold, InScreen, InText, InTag, InFrame, iyo InArticle.
Noocyada noocyada xayeysiinta waxay ku habboon yihiin kombiyuutarada, mobilada iyo kiniiniyada; waxay ka soo muuqan doontaa sanduuqyada leh sawirro, qoraallo lagu daray oo loo aqoonsan karo inay yihiin xayeysiinno, kuna yaalliin ereyo kala duwan oo muhiim ah.
Xayeysiisyada ayaa laga yaabaa inay ka muuqdaan meel kasta oo bogga uma baahna meel cayiman oo lagu muujiyo xayeysiiska.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan barxadani waa inaysan ka gaabin webka, maaddaama xayeysiisyadiisu ay yihiin waxa ugu dambeeya ee lagu soo rogo bogga; markaa nuxurka ma saameyn doono waqti kasta.
Waa tee habka lacag bixinta?
Mashruucani wuxuu abuuraa lacag bixin isla marka la gaaro xaddiga ugu yar ee loo baahan yahay oo ah $ 50, isagoo ah habka lacag bixinta iyadoo loo marayo PayPal, eCheck, Payoneer iyo ACH (dadka deggan Mareykanka). Waxay sidoo kale leedahay habka lacag bixinta bangiga, xaaladdan lacagta ugu yar ee loo baahan yahay waa $ 100.
Mashruucani wuxuu bixiyaa CPM iyo CPC, kharashkiiba kumanaan aragti iyo kharashkiiba guji siday u kala horreeyaan. Soo noqnoqodkeeda lacag bixinta waa Net45, oo bixinaysa 10% dheeraad ah guddiga gudbinta.
Sideen ula shaqeeyaa Infolinks?
Si fudud oo dhakhso leh, kaliya gali URL-ka bogga aad rabto inaad ku dhex-darto xayeysiiskaaga, waa inaad sugto ugu yaraan 48 saacadood inta codsigaaga la oggolaanayo; Marka laguu oggolaado, waxaad heli doontaa koodh ay tahay inaad ku dhejiso websaydhkaaga oo kaliya waa daqiiqado daqiiqado ah in Infolinks ay muujiyaan xayeysiin.
Taageerada farsamada had iyo jeer waa feejignaan wixii dhibaato ah ee soo bixi kara, firfircoon 24 saacadood maalintii.
Faa’iido darrooyinka madal?
Xayaysiisyada qaarkood ee la bixiyo waa faragelin.
Xayeysiinta ku jirta qoraalka waxay gaareysaa ilaa 12 eray, sidoo kale waxay ku darsaneysaa qaab kale oo xayeysiin ah, dhibic ka dhigeysa websaydhka wax yar bilicsanaanta.
Joogtaynta bixinta waa 45 maalmood; taas oo dhib ku ah daabacayaal badan markay timaado bixinta lacagaha kale.
Dhibco: 4.5 ka mid ah 5tii.
hadda ka badan 47.000 tifaftire Iyo sida barnaamijyada kale, waxaa looga baahan yahay inay waxyaabahaagu ka kooban yihiin tayo iyo sharci. Lacag-bixinta TheMoneyTizer waa mid aad u dhakhso badan kana duwan barnaamijyada kale, waxay bixisaa kumanaan aragti (CPM), ma bixiso (CPA), (CPL) ama (CPC). Waxaa loo heli karaa madal kasta oo laga heli karo boggeeda gaarka ah (Blogger, WordPress), ma ogola in la kordhiyo.
Sidee loola shaqeeyaa iyaga?
Waqtigan xaadirka ah si aan ula shaqeyno milkiilaha qalinleyda waa lagama maarmaan 30.000 isticmaalayaasha kaliya Si aad ugu raaxaysato adeegyadooda, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad haysato fayl ads.txt oo sax ah oo ku jira websaydhka, sidaas darteed maaddada loo yaqaan'oneyoneytizer 'kuma shaqeeyaan barnaamijyada sida wix awood la'aantaada inaad rakibto faylkaas.
Haddii aad rabto inaad bilowdo inaad la shaqeyso themoneytizer kaliya u gudub boggooda rasmiga ah, riix badhanka is qor oo hadda buuxi foomka; Dhexdeeda waa inaad gelisaa url-ka boggaaga oo aad sugtaa habka ansaxinta. Waa inaad maskaxda ku haysaa inaysan aqbalin bogagga ay ku dhiirrigeliyaan rabshadaha, waxyaabaha la xaddidayo, waxyaabaha lagu keydiyo, ku xadgudubka xuquuqda daabacaadda iyo waxyaabaha galmada ka yar.
Markii aad galaysid degelkooda waxaad dareemi doontaa sida ilmo oo kale, maxaa yeelay boggu waa mid aad u fudud oo waad fahmi doontaa wax walba, ha ka welwelin, meel kasta waxay leedahay sharraxaad faahfaahsan, markaa ma lumin doontid.
Waxay leeyihiin laba nooc oo xayeysiis ah, heerka ama midka caadiga ah iyo kan ugu sarreeya, oo in kastoo kan dambe uu aad u cajaa’ib badan yahay, haddana qadiimiga ahi wuxuu leeyahay faa'iido badan, gaar ahaan xayeysiisyada loo yaqaan ROBAPAGINAS. Iyagu waa nooc xayeysiis ah oo daboolaya qayb wanaagsan oo ka mid ah websaydhka oo loogu talagalay PC iyo moobiil.
Themoneytizer wuxuu leeyahay xaddiga ugu yar (in ka yar google Adsense) si loo bixiyo lacag bixinta Paypal laga bilaabo € 50 iyo iyada oo loo marayo wareejinta bangiga oo leh ugu yaraan € 100. Dhibic ka soo horjeedda maaddada ganacsiga ayaa ah waqtiga sugitaanka ee lacag bixinta, biilkooda waxaa la sameeyaa 10ka bil kasta, hase yeeshe, waxay lacag siiyaan macaamiishooda ilaa 60 maalmood ka dib marka la dhammaystiro ugu yaraan loo baahan yahay.
Waqtiga lacag bixinta waa mid aad u dheer, waxay qaadataa 60 maalmood si loo gaaro isticmaaleyaasha.
Waxay codsadaan 30.000 adeegsadeyaal gaar ah bishiiba, haddii aad bilowdona ma ansaxin doonaan codsiga.
Beddelka wareejinta bangigu waa Paypal oo keliya.
Waxay ku shaqaysaa kaliya nidaamka CPM.
Waa tartanka tooska ah ee Adsense ee ay hogaaminayaan Yahoo iyo Bing, waa shabakad xayeysiin ah oo caan ka dhigeysa shirkadaha waaweyn, iyagoo leh daabiciyeyaal NY Daily News, Forbes, iyo kuwo kale. Media.net waxay awood siineysaa daabacayaasha iyo xayeysiiyeyaashu inay ka faa'iideystaan ​​bartilmaameedka saxda ah iyada oo loo marayo fikradaha / qeybaha, noocyada xayeysiinta kala duwan, iyo sare u qaadista ROI ee xayeysiiyayaashooda iyo waxyaabo kale oo badan. In kasta oo Adsense ay ka horeyso xirmada dhanka xayeysiinta, Media.Net waxay hubineysaa in xayeysiiyayaashu ay kaqeybqaataan xaraashka marwalba si macaamiisha loo siiyo xayeysiinta ugu fiican.
Maxay yihiin noocyada xayeysiiskaagu?
Maaddaama loo qoondeeyey cabirrada, xayeysiisyadan waxaa loogu talagalay shaashad kasta, iyo sidoo kale iswaafajinta iOs, qalabka Android, iPad iyo kiniiniyada.
Ka noqoshada lacagta la uruuriyey waa inay noqotaa ugu yaraan $ 100 taas oo Waxaad ku codsan kartaa adoo adeegsanaya Paypal ama bangiga laguu soo dirayo. Soo noqnoqodkeeda lacag bixinta waa 30 maalmood kasta.
Sideen ulashaqeeyaa Media.Net?
La shaqaynta iyaga ayaa ah mid aad u fudud, waa inaad codsataa casuumaad hore ka hor intaadan dirin codsiga inaad meel dhigtid xayeysiisyadooda boggaaga Hal dhibic oo loo roon yahay ayaa ah inaysan codsan xaddiga ugu yar ee taraafikada; Haddii aad dunidan ku cusub tahay tifaftire ahaan, waxaad si fudud ula shaqeyn kartaa Media.Net. Luqadda asalka ah ee madalku waa Ingiriisiga oo tarjumaad lagu heli karo dhowr luqadood.
Media.Net waxay weydiisaneysaa madbacadda bogag internet oo sax ah, oo leh nuxur sharci ah; taas oo aan kor u qaadin isticmaalka walxaha hallucinogenic sida daroogada. In aysan kor u qaadin rabshadaha, iibinta beenta, alaabada la xaday, iyo kuwa kale; waxyaabaha galmada, dulqaad la'aanta jinsiyada, daawooyinka, iyo kuwa kale.
Ugu yar ee loo baahan yahay waa $ 100 labadaba paypal iyo wareejinta bangiga.
Xayaysiisyada la bixiyo waxaa badanaa lagu waafajiyaa shaashadda oo dhan marka laga hadlayo mobilada, taas oo ka careysiisa isticmaaleyaal badan.
Waa barxad si dhakhso leh koritaan ugu socda, halkaasoo ay ka sameyso wax ka badan 10.0000 milyan bishiiba. Nidaamkeedu waa fududahay in la isticmaalo, sidoo kale wuxuu bixiyaa qaabab gogol-xaadh ah iyo qaabab hadda socda oo ah pop-unders, ogeysiisyo riix iyo fiidiyoowyo fiidiyoow ah. Si otomaatig ah u hagaaji xayeysiiska si aad u muujiso xayeysiimaha ugu faa'iidada badan. Qaabka ogeysiinta riixisteeda ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa ee leh waxqabad aan la barbardhigi karin, kana sare maray shirkadaha kale ee leh qaabkan oo kale.
Nidaamyada lacag-bixinta ee ay isticmaasho adsterra waa: ePayments, Paxum, WebMoney, Bitcoins, kala wareejinta bangiga iyo PayPal, baajinta laba jeer bishii (Net15) markay gaaraan xaddiga ugu yar ee loo baahan yahay ee $ 100, WebMoney iyo Paxum waxay ka baxaan ugu yaraan $ 5.
Nooca komishanku waa halkii CPM, CPL, CPA. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay guddi 5% ah oo loogu talagalay gudbinta.
Adsterra waxay leedahay cabbirro kala duwan oo boorar ah marka lagu daro qaabab kale sida Interstitials, Sliders, Popunder, Popups, xiriiriyeyaal toos ah, xayeysiisyada moobiilka, iyo kuwo kale. Waxaad marin ka heli kartaa nooca qaababka Premium, oo si fiican loo bixiyo, haddii aad leedahay tiro badan oo ah taraafikada dabiiciga ah ee shabakadda.
Sideen iskaga diiwaan galiyaa adsterra?
Gali bogga rasmiga ah, dhexdiisa waxaad iska diiwaangelin kartaa daabacaad ahaan ama xayeysiis ahaan, riix xulashada Ma haysto xisaab, Buuxi foomka diiwaangelinta, marka koontada la abuuro waa inaad gashaa baloogga ama bogga aad rabto inaad xayeysiiska soo bandhigto.
Faa’iido darrooyinka madal:
Qiyaasta celceliska lacag bixinta ee hooseysa marka loo eego Google Adsense.
Baahida aadka u sareysa iyo tayada ee tahriibinta dadka.
Waxay leedahay xayeysiis aad u faro badan sida Popunder iyo Popup oo faragalin ku haya hagidda, in kasta oo aad gabin karto, iyagu waa qaababka soo saara inta badan
Dhibco: 3 ka mid ah 5tii.
Haddii aan ka hadlayno tartamayaasha waaweyn iyo waxyaabaha kale ee lagu beddelayo Google Adsense, markaa Taboola ayaa ka mid ah; waa madal xayaysiis ah. Ujeeddadeeda ugu weyni waa in la abuuro taraafikada iyada oo lagu mahadinayo talo soo jeedinta; marka lagu daro in la siiyo aragga inta ugu badan ee suuragalka ah. Madalkani wuxuu ku siinayaa laba siyaabood oo loo shaqeeyo iyaga oo leh, kuwa ugu horreeya sida maalgashade (xayeysiiya) iyo tan labaad, oo ah daabiciye.
Taboola, tan beddelka ah ee Google Adsense, waxay leedahay faylalka macaamiisha leh heerar sare ee xayeysiinta, kuwaas oo had iyo jeer maal gashada ololeyaal kala duwan. Xayeysiinta bixisa wuxuu ku hagaajiyaa qaabab kala duwan, oo ka bilaabmaya sawir fudud illaa fiidiyowyo soo jiidasho leh oo soo jiidan kara dareenka booqdaha. Algorithm-keeda ayaa sifiican looga shaqeeyay oo ay sifiican ula jaan qaadayaan xayeysiiska sida ku cad boggaaga.
Laakiin tani maahan waxa ay bixiso oo dhan, haddii ay tahay go'aanka daabacaha, waad kala shaandheyn kartaa xayeysiisyada aad ka muujineyso boggaaga, waana sababta loogu tixgelinayo inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu beddelan karo Google Adsense 2021.
Sideen ula shaqeeyaa Taboola?
Waa inaad ku buuxisid foomka ay ku codsadaan websaydhkooda, marka lagu daro, waa inaad u hoggaansantaa xaddiga 5.000 booqasho bille ah ama ka badan si loo helo ogolaansho. Waa in la ogaadaa in barxadani aysan aqbalin waxyaabaha ka mid ah Warez sida soo degsashada, nuxurka xuquuqda lahaanshaha ama bogagga bogagga kacsiga leh.
Xayaysiis noocee ah ayuu Taboola bixiyaa?
Madashu waxay fahamsan tahay baahiyaha daabacayaasha iyo xayeysiiyaasha; iyo qanacsanaanta ay daabacayaasha qaarkood ku qabi karaan xayaysiimaha kala duwan ee ka soo muuqan kara boggooda. Taasi waa sababta ay u hagaajineyso xayeysiiska ugu badnaan si ay dhammaantood u la kulmaan tayada ugu badan. Noocyada xayeysiisyada ay bixiyaan waxaa ka mid ah: Baararka Widget-ka, xayeysiisyada nuxurka leh, baararka gaarka ah, aaladda iskuxiraha, Xayeysiimaha Webka ee Moobilka, xayeysiiska fiidiyowga, iyo kuwo kale
Guusha barnaamijkan xayeysiintu kuma salaysna kaliya boqolkiiba CTR taas oo sareysa (oo uu caan ku noqday) qiyaastii 15%; laakiin sidoo kale nooca xayeysiiska ay bixiso, qorshaha, xayeysiis hooyo, waa nooc ka mid ah qaab muuqaal ahaan ula jaan qaadaya waxyaabaha laga helo websaydhka; taasi waa, waa xayaysiis u muuqda inuu ka kooban yahay. Waxa ugu fiican ee noocan ah xayeysiinta waa taas gabi ahaanba ma ahan Uma muuqato si lama filaan ah, kumana qasbeyso inaad riixdo, waa uun halkaa, adiga ayay ku sugeysaa.
Sidee tahay habka lacag bixinta? Taboola waxay u baahan tahay ugu yaraan $ 50 bishii si ay u awoodaan inay u diraan lacagta, ama ha ahaato mid wax lagu diro ama bangiga lagu diro, nidaamka lacag bixintooduna waa Net45, oo ah, 45 maalmood kasta.
Faa'iido darrooyinka ku jira barnaamijkan?
Taageeradooda farsamo waxaa lagu heli karaa Ingiriisiga oo kaliya waana wax aad u xun marka loo eego qiimeynta isticmaaleyaasha.
Soo noqnoqodkeeda lacag bixinta waa 45 maalmood kasta.
Bixinta waxyaabaha la soo saaray waxaa kaliya oo lagu diri karaa Payoneer ama wareejinta bangiga, Payoneer wuxuu bixiyaa dhibaatooyin badan. Ma aha habka lacag bixinta ee ay ku talisay bulshada adeegsadayaasha ah.
Ma lahan wax guddi ah gudbinta.
Haddii aad ka bilaabanayso adduunkan daabacayaasha, oo websaydhkaagu aanu lahayn naqshad soo jiidasho leh iyo tirada booqdayaasha loo baahan yahay, laguma aqbali doono.
Lagu meeleeyay darajada koowaad xayeysiisyada pop-unders, iyagoo ku andacoonaya inay yihiin tartame bixiyaha ugu fiican ee noocan xayeysiinta ah. Intaas waxaa sii dheer, degelkani wuxuu aqbalaa noocyada kala duwan ee waxyaabaha, oo ay ku jiraan bogagga soo dejinta. Madalkani wuxuu leeyahay xayeysiiyayaal ka socda in ka badan 50 dal. Haddii websaydhkaagu ku xadgudbo xeerarka Google ama aan la oggolaan karin Adsense, waxaan si adag kugula talineynaa inaad tijaabiso barmaamijkan.
PopAds waxay bixisaa xayeysiis pop-unders / popups, marka lagu daro in lagu buuxin karo barnaamijyada kale ee xayeysiiska ah ee ay daabacadu rabto. Intaas waxaa sii dheer, waxay hadda haystaan ​​koodh cusub oo loo yaqaan 'anti-adblock' si markaa xayeysiimaha aan loo xannibmin oo ay u sii wadaan soosaarka dakhliga.
PopAds waxay leedahay nidaam tixraac ah oo aad ku heli karto 10% faa'iido dheeraad ah, waadna kala noqon kartaa lacagahaaga adigoo maraya by Paypal iyo AlertPay iyadoo uguyaraan $ 10 iyo wareejinta bangiga. Lacag bixinta waa la shaqeyn karaa ilaa saacado, sidaa darteed waad la noqon kartaa maalin kasta haddii loo baahdo. Xayeysiintu ma ahan mid soo duuleysa, laakiin waa mid faragalin ah, maadaama bog cusub uu furmayo markii aad gujineyso websaydhka, kaas oo la dhigi doono dhinaca hoose ee shaashadda aan daawaneyno.
Sida bogga intiisa kale, diiwaangelintu waa mid aad u fudud websaydhkuna waa mid aad u wacan, waa inaad buuxisaa dhammaan macluumaadka looga baahan yahay bogga rasmiga ah ee goobta, iyo DIYAAR, ugu fiican? Way aqbalaan qof walba! Ansixinta waxaa badanaa lagu bixiyaa saacado yar gudahood.
PopAds waxay ku habboon tahay degello badan oo ay mamnuucday Adsense, sida madadaalada dadka waaweyn, goobaha khamaarka, iyo inbadan.
Waad ka faa'iideysan kartaa degelkan noocan ah, si kastaba ha noqotee, adeegsadayaal badan ayaa leh xannibaadayaal pop-unders oo ku jira mashiinnada raadinta.
Waxaa lagu heli karaa oo keliya luqadda Ingiriisiga.
Noocyada xayeysiinta ah waxay badanaa u shaqeeyaan bogagga shabakadda oo aad u gaar ah.
Waxaa lagu kabi karaa barnaamijyada kale ee xayeysiinta, sidaa darteed adigu waxaad uga faa'iideysan kartaa inta ugu badan ee dakhligaaga, sida kii hore, kani waa shabakad xayeysiis ah caymiska adduunka.
Si ka duwan barnaamijyada kale ee PopCash haddii ay aqbasho websaydhyada leh waxyaabaha qaangaarka ah sida khamaarka, bogagga erotic iyo xitaa sawir-gacmeedka, sidaa darteed waad lacag ku yeelan kartaa degel websaydh ah 'PopCash', oo si cad loogu xisaabtamayo xayeysiiyayaal gaar ah mawduucyadan.
Barxaddan xayeysiinta ah waxay ku siisaa xayeysiis ka pop-unders / popups top, stealthily, isku dayaya in ay noqon sida ugu yar faragelinta sida ugu macquulsan. Intaas waxaa sii dheer, heerka lacag bixintaada waxaa xisaabiya CPM iyo CPC.
Bixinta waxaa lagu bixiyaa iyadoo lala kulmayo $ 10 oo ah khidmadda ugu yar, marka lagu daro, sida PopAds, lacag-bixinta si dhakhso leh oo hufan ayaa looga shaqeeyaa, iyadoo ku dhow 48 saacadood. in lacagtaada la helo.
Sideen ula shaqeeyaa?
Saxiix, waa wax aad u fudud, raac talaabooyinka, buuxi foomka iyo voila, waa lagaa aqbali doonaa. Waa madal aqbasha noocyo badan oo bogag internet ah, iyadoon loo eegin tirada booqashooyinka aad soo gasho, waad la macaamili kartaa iyaga bilowga boggaaga. Intaa waxaa dheer, taageerada farsamada ayaa la heli karaa inta badan, markaa haddii aad su'aalo qabtid, toos ayaad ula xiriiri kartaa.
Noocan ah xayeysiiska pop-unders ayaa loo arkaa inay dhib ku yihiin isticmaaleyaal badan, sidaas darteedna adeegsanaya xannibaadayaasha baarayaashooda, haddii xayeysiiska aan la arkin, lama tirin karo.
BARNAAMIJKA XIRIIRKA (Xayeysiinta Dheeriga ah)
Farqi weyn ayaa u dhexeeya shabakadaha xayeysiiska ah iyo barnaamijka ku xiran; shabakadaha xayeysiiska waa shirkado isku dhafan oo leh xayeysiisyaal (waxay bixiyaan alaab iyo / ama adeeg) si loogu muujiyo inay yihiin xayeysiin boggaaga ah; Intii lagu jiray barnaamijka ku-xirnaanta waxaa jira alaabooyin aan dhammaad lahayn oo adigu waxaad go'aansataa waxa la iibinayo. Waa in la ogaadaa in midkood noqon karo kaabista kan kale, sidaasna uga faa'iideysanaya labadaba.
Laga bilaabo tan, waxaa jira laba shirkadood oo ku weyn iibka adduunka oo dhan, waxay bixiyaan boqolkiiba iibka casiir leh daabacaad kasta.
Waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca eBay Affiliates, iyo habka lacag looga helo iyaga oo aad u fudud; xayeysiinta ay muujiyeen asal ahaan waa alaabooyinka iibka, marka haddii isticmaaleyaasha websaydhkaagu u turjumaan kuwa wax iibsan kara, waxaad kasban kartaa boqolkiiba boqol taraafikadaan.
Sideen ula shaqeeyaa eBay?
Si aad ula shaqeyso iyaga kaliya waa inaad marin u hesho foomka dalabka koontada, hadaadan mid lahayn, waxaad ka heli kartaa goobta adoo adeegsanaya Facebook ama koontadaada Gmail. Ka dib markaad ku dhexjirto masraxa waa inaad doorataa nooca lammaanaha aad noqon doontid, wuxuu ku siinayaa liis ballaaran oo xulashooyinka ah, dooro midka ugu habboon.
Maskaxda ku hay nooca taraafikada ee gaadha boggaaga, markaa waan ogaan karnaa Maxaa la siiyaa isticmaaleyaashaada?; laakiin tani maahan waxa kaliya ee ay tahay inaad ogaato, marka lagu daro, isticmaaleyaashaadu waa inay sameeyaan iibsasho lagu qanco waad awoodaa kasbadaan boqolkiiba iibka.
Maxay yihiin hababka lacag bixinta?
Markaad haysato 10 ka mid ah lacagta la xushay, waxaad ku ururin kartaa iyaga oo nabad ku qabta, koontada aad hore ugu xirnayd. Caadi ahaan eBay waxay joojisaa lacagaha 10-ka bil kasta. Waxaad si toos ah uga arki kartaa boqolleyda iibka websaydhkooda qaybta ''Miiska lacagta '', oo u dhexeeya 1,00% ilaa 4,00%.
Hal qodob oo maskaxda lagu hayo ayaa ah in iibka laga sameeyay xiriiriyeyaasha aad gelisay boggaaga internetka ay xadidan yihiin, Maxaan ugala jeedaa tan? Boqolleyda guuleysiga waxay leedahay xaddidaadda xaddiga. Tusaale ahaanHaddii sheyga aad nasiibka u heshay inaad iibiso uu leeyahay qaddar $ 500, xaddiga ugu badan ee qaybtaas waa $ 250, 4% ka mid ah tani waxay noqonaysaa $ 10 oo aan noqonayn $ 20.
IN LA FIIRSADO, eBay lama mid aha Amazon, waa inaad si sax ah diiradda u saartaa waxaad rabto inaad ka iibiso halkaas, maadaama barxadani tahay mid aad loogu yaqaan iibinta gabi ahaanba waxyaabaha meesha ka baxsan, sida waxyaabaha qadiimiga ah, walxaha qalaad iyo kuwa gaarka ah Xulashada niche-gaaga si caqli badan ayaa kaa caawin doonta wax badan.
Waqtigan xaadirka ah bulshada ugu badan ee kuxiran meeraha, tani looma jeedin oo kaliya kuwa bixiya wax soo saar la taaban karo; laakiin kuwa caqligooda maareynaya inay u soo bandhigaan nuxur tayo leh akhristaha, sidaas darteedna ay awood u leeyihiin inay lacag ka helaan mareegtooda.
Iyada oo loo marayo matoorrada xiriiriyeyaasha, abuurayaasha maaddooyinka, boggaga wax ku qora, tifaftirayaasha iyo kuwo kale ayaa awood u yeelan doona inay dhagaystayaashooda u diraan talooyinkooda iyo sidaas faa iido ku hel iibsiyada guuleysta.
Sidee loo xisaabiyaa lacagta la bixinayo?
Boqolleyda la kasbaday waxay ku kala duwanaan doontaa sheyga la iibiyay; Si ka duwan eBay, Amazon waxay bixisaa boqolkiiba sare iibka, oo ka bilaabma 1% ilaa 12%. Waa inaad aqriso shuruudaha iyo shuruudaha, iyo waxa khuseeya markaad iibineyso, marka waxaa lagaa siinayaa oo keliya boqolkiiba inta lagu heshiiyey qiimaha saafiga ah ee badeecada, khidmadaha dheeriga ah ma khuseeyaan guddiyada, tusaale ahaan, baakadaha, gaadiidka, ama qaar faahfaahin gaar ah.
Amazon ayaa bixisa boqolleyda iibka tooska ah iyo midka aan tooska ahayn, tixgelinta iibinta tooska ah ee maqaalka ay si toos ah uga iibsadaan xiriirkaaga; iyo iibsi aan toos ahayn haddii ay ka soo galaan xiriirkaaga oo ay ku hagaajiyaan shey ama adeeg kale, kuwaas oo aad kasban karto oo keliya 1,5%.
Waxa ugu muhiimsan markaad rabto inaad ku isticmaasho bogga noocan ah boggaaga waa inaad barato waxyaabaha soo socda Noocee degel ah ayaan haystaa? Noocee adeegsadeyaal ah ayaa soo gala degelkayga?, maxaa yeelay haddii websaydhkaagu tusaale ahaan yahay, farshaxanno, oo aad adeegsato qalab badan, waad dhiirrigelin kartaa iyaga oo markaa martidaadu noqdaan kuwa wax iibsada.
Lacag-sameynta ku habboon Adnetwork iyo ku-xirnaantaes
Hagaag, markii aad ku bixisay waqtiga lagama maarmaanka u ah raadinta habka ugu wanaagsan ee xayeysiinta si aad lacag ugu sameyso websaydhkaaga adoo dooranaya Adsense, mid ka mid ah baddalkeeda ama aad dooratay inaad raacdo, waxaan kugula talineynaa inaad barato mawduuca "Iibsiga iyo iibinta waxyaabaha la kafaala qaaday" oo ah hawl kaabaya dakhligaaga, si loo kordhiyo.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato ayaa ah inay jiraan dhowr madal oo noocaan ah, kuwaasoo ay soo booqdaan xayeysiiyayaal fara badan oo leh bogag aad u firfircoon, wax adiga kuu fiican haddii aad bilaabeysid; Sababtaas awgeed dhib kugu noqon maayo inaad sameysid iibkaagii ugu horreeyay. Sidoo kale, haddii aadan iib ka helin muddada gaaban, waxay noqon doontaa hab aad isugu muujiso inaad tahay bandhig si aad u furto suurtagalnimada in xayeysiiyayaashani kula soo xiriiri karo banaanka madasha kaas oo aad ku soo bandhigeyso boggaaga.
Waxa kale oo muhiim ah in la caddeeyo in daalacashada barnaamijyadan metelaya beddelka Google Adsense, ay kaa caawin doonaan inaad si ballaadhan u ogaato goobta aad ku soo gelayso, ama aad hesho amar ku saabsan wax aadan aqoon, ama aad barato tartanka suurtogalka ah ee adiga ku yeelan doonaan internetka. Waxay tagaysaa iyada oo aan la sheegin in had iyo jeer lagugula talinayo inaad ka muuqato dhammaan barnaamijyadan, maxaa yeelay marka lagu daro helitaanka aragti la xiriirta xayeysiistayaasha, waxaad fursad u leedahay inaad ku kordhiso dakhligaaga iibsashada iyo iibinta maqaallada la kafaala qaaday.
U bandhigida naftaada si aad u qorto waxyaabo lacag leh ayaa sidoo kale u horseedi doonta waxyaabo cusub boggaaga waxaad diirada saari kartaa inaad dhigto oo aad ku kasbato laba jibbaar. Waxaan ku sharaxeynaa waxbadan oo ku saabsan tusahan waxaan halkaan kuugu dhaafi doonaa halkan hoose.
Haddii kiiskaagu yahay in lagaa mamnuucay, ama aysan weli kaa aqbalin mid ka mid ah shabakadaha xayeysiinta, ama aad si fudud u rabto inaad weyneyso daqligaaga, waxaan kaa tageynaa hage dhameystiran of the dhufto ee ugu wanaagsan ee alaabada lagu iibiyo.
Su’aasha ay daabacayaasha, mareegaha wax qora ama milkiilayaasha degelladu isweydiiyaan ayaa ah Muxuu yahay barmaamijka ugufiican ee lacag lagu kasbado degel-kayga?Si kastaba ha noqotee, tani waxay ku xirnaan doontaa waxyaabaha ku jira; Marka haddii websaydhkaagu aanu u hoggaansamin siyaasadaha shirkadda weyn ee Google, mid ka mid ah kuwan beddelka Google AdSense hubaal waxay ku habboon tahay baahiyahaaga.
Waa maxay waxa lagama maarmaanka ah ee ay tahay inaad ku haysato websaydhkaaga?
Qaaciddada sirta ahi waa sidan soo socota, sax ah oo joogto ah; maxaa yeelay kumanaanka isticmaale ee internetka isticmaala ayaa markasta fiiro gaar ah u leh waxyaabaha cusub; tayo leedahay markaad wax qoraysid; Qofna ma doonayo inuu galo degel websaydh ah oo aan lahayn wax dhab ah oo la bixiyo, markaa markaad dooranayso xayeysiiskaaga, iska ilaali inta ugu badan ee suurtogalka ah inaysan ku jirin faragelin. Iyo tan ugu muhiimsan, SEO wanaagsan!Sidan ayaad kuheli kartaa tiro badan oo booqdayaal ah websaydhkuna wuxuu yeelan doonaa faa'iidooyin wanaagsan.
beddelka google adsense beddelka adsense 2021 kale google adsense sida loo lacag abuuro adoon lahayn google adsense muhiimadda ay leedahay lacag ku sameynta google adsense ikhtiyaarka ugufiican google adsense beddelka ugu wanaagsan ee google adsense 2021 beddelka ugu fiican ee adsense lacag ka sameyso barta aan lahayn adsense xulashooyinka google adsense dhufto ee aan ahayn google adsense dhufto ee laga helo lacag aan ahayn google adsense maxaad u haysataa xulashooyin kale oo google adsense ah
Qalabka cabirka korontada (Ohmmeter, Ammeter, Voltmeter)
Qodobbada ugu dambeeyay ee la xiriira